चीनको युआनको तीव्र वृद्धि दिगो नहुने विज्ञको चेतावनी ! – Mission Khabar
चीनको युआनको तीव्र वृद्धि दिगो नहुने विज्ञको चेतावनी !
मिसन खबर ४ असार २०७८, शुक्रबार १२:०२
एजेन्सी। अमेरिकी डलरको तुलनामा चिनियाँ युआनको द्रुत वृद्धि दिगो नहुने केन्द्रीय बैंकका एक पूर्व अधिकारीले दाबी गरेका छन् । सरकारी मिडिया सिन्हुवा न्युजसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले चिनियाँ युआन दिगो नहुने बताएका हुन् ।
युआनले मेमा १ दशमलव ७ प्रतिशत वृद्धि गर्दै तीन वर्षकै उच्च वृद्धि गरेको थियो । यसले गत साता प्रति डलरको स्तरमा ६ दशमलव ४ को मनोवैज्ञानिक उछाल हासिल गरेको छ । यसको गति विस्तारै कम हुँदै गएपनि यसले द्विपक्षीय शर्तमा एकतर्फी बेटको चिन्ता गराएको छ ।पीपुल्स बैंक अफ चाइना (पीबीओसी) ले शुक्रबार युआनको मिडपोइन्ट रेट ६ दशमलव ३८५८ प्रति डलर राखेको थियो । यो सन् २०१८ को मे पछिको सबैभन्दा बलियो दर रहेको जनाइएको छ । गत वर्षको सुरुमा चीनको अर्थतन्त्रमा महामारीको कारणले आएको गिरावटबाट द्रुत गतिमा पुनः सुधार भएको छ भने युआनको लाभ धेरै हदसम्म डलरको कमजोरीसम्म पुगेको छ ।
पीबीओसीले हालका फाइदाहरूमा असुविधा नदेखाएपछि चिनियाँ इकाईमा लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी बढाएका छन् । तर, ठूला सरकारी बैंकले गत साताको सुरूमै अमेरिकी डलर किनिरहेकोमा युआनको फाइदालाई तीव्र बनाउने प्रयासको रूपमा हेरिएको छ । पीबीओसीका सर्वेक्षण र तथ्यांक विभागका पूर्व निर्देशक शलनंग सचेलनले युआनको ओभरशटले छोटो अवधिको अनुमान लगाउने गरेको र असुरक्षित भएको बताएका छन् । यनले यसलाई दियो रुपमा बुझ्न नहुने सुझाव दिएका छन् ।